FIFIDIANANA : Mafana ny fampielezan-kevitra mikasika ny fifidianana filoham-pirenena alohan’ny fotoana
Tsy misy hafa amin’ny hoe efa tafiditra ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fampielezan-kevitra mikasika ny fifidianana filoham-pirenena ny aty Ambatondrazaka, anaovan’ireo mpanohana ny kandidà sasany azy. 15 mai 2013
Raha ny fantatra dia hifanesy ho avy aty Alaotra izy ireo ary efa mandeha sahady ny « tam-tam » manerana ny tanàna mankalaza izany.
Ny faran’ny herinandro ho avy izao dia hisy mpanakanto lehibe roa ho avy eto an-tampon-tanànan’Ambatondrazaka hanafana ny fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoanan’ny kandidà ho filoham-pirenena iray. Maimaim-poana ny fijerena izany, hoy ireo mpanomana io lanonana lehibe io.
« Mety hahazo olona maro tokoa io kandidà io satria liana te hijery ireo artista hanafana izany ny rehetra. Maromaroa ny tahaka izao sitrany ahay mba hahafahana miala voly sy manary eritreritra amin’izao fotoanan’ny krizy izao », hoy ireo naneho hevitra.